ရုရှား စကားပြော Training Website — MYSTERY ZILLION
ရုရှား စကားပြော Training Website
December 2008 edited October 2010 in Other
Alexander ကို ရုရှား Language ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ PM send ပြီးမေးကြလို့ ..... ကိုယ်အမြဲသုံးဖြစ်တဲ့ Site လေးတွေ ပြောပြမလို့။ :79:
Russian language ကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် mm မှာသိပ်မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျနော် Ygn မှာတုန်းကလိုက်စုံစမ်းတာ ပန်းဆိုးတန်းမှာ သင်တန်းတစ်ခုပဲသွားတွေ့တယ် (2007 တုန်းကပါ)။ ဒါတောင်သင်တန်းကြေးက မိုးပေါ်မှာဗျ။ ( YUFL ကလဲ Diploma Course ပဲရှိတာပါ။ အချိန်ယူပြီးတက်မှရမှာ .... ။ ) :26:
အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာ Software လေးတွေ၀ယ် ( Software ကလဲ တစ်ခွေပဲရှားရှားပါးပါး ရှာတွေ့ဖူးတယ် .... Active မှာ၀ယ်တာ ) ... Online ပေါ်တက် Russian Training Website လေးတွေမှာ Try ကြည့် .... အဲလိုပဲ Self-Training လုပ်ပြီး လေ့လာရတာ ( ဆရာမပြ နည်းမကျတဲ့ ... Alexander လဲဘယ်လောက်မှ မတတ်သေးပါဘူး )
Russian Language လေ့လာချင်တဲ့သူတွေလေ့လာနိုင်အောင် Site လေးတွေပြောပြ လိုက်မယ်နော်။
http://www.russianlessons.net/ <<< အကြိုက်ဆုံး Site ပါ။ Sound ပါ ပါပါတယ်။
http://en.wikibooks.org/wiki/Russian/Contents <<< ဒီ Site လဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
တခြား Bro & Sis တွေလဲ သိတဲ့ Site ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိရင် ... ဒီမှာ ဆက်ရေးပေးသွားကြပါနော်။ ကျနော်လဲ ဆက်လေ့လာလို့ရတာပေါ့။ :77:
Давайте разделять наше знание с белым сердцем
Note : Alexander က Russia ရောက် ပညာသင်မဟုတ်ပါ ... :33: ...Russian ကိုစိတ်၀င်စားတဲ့ IT Man သာဖြစ်ပါသည်။
ကို Alexander ရဲ့ Russia Language ကို စိတ်၀င်စားပါတယ်..
Russia Language က ပြောရတာလွယ်ကူပေမယ့် Grammer ပုံစံကျတော့ Case တွေက အများကြီးဗျ..(ဥပမာ- Genative Case) ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က 14.9.07 မှ 4.4.08 ထိ Russia Language Tutor တွေနဲ့ သင်တန်းတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါပေမယ်လို့ Russia ပညာသင်မသွားချင်လို့
သိပ်ပြီးတော့မလေ့လာဘူးဗျ။ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောတတ်ယုံပါဗျာ..၁။ ဥပမာ- မင်္ဂလာပါ (စဒါစဗွီကျယ်-Russia လိုအသံထွက်)။ I love you. ( ရာလုဗလူကြည်ဗျာ - Russia လိုအသံထွက်)။Russia Language လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ ကို Alexander ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
http://www.sharedtalk.com/ ဒီလင့်လေးကို ၀င်ကြည့်ပါဦး။ ရုရှဘာသာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာတော်တော်များများလေ့လာနေသူတွေနဲ့ type chat ရော၊ voice chat ရောပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီခဲ့တာ ဒီ site လေးပါပဲ။ ရုရှကိုရောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားကို လူရိုင်း မျိုးနွယ်စုကလာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ဘာသာစကားဆရာမနဲ့ စကြုံရတယ်။ ဖော်ရွေမှုမရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေ (အင်း.. ဥရောပစတိုင်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေ) ကြားမှာ၊ ရတဲ့လစာနဲ့ ဘယ်သူမှ အထင်ကြီးအောင်လည်းမနေနိုင်လေတော့ ဘာသာစကားလေ့ကျင့်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၆၀ ဆယ်ကျော်မိခင်ကို ခွဲထားခဲ့ရတဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီး လာလာတွေ့နေရတဲ့ချစ်သူ၊ မိဘသေပြီဆိုပြန်ခွင့်မရကြတဲ့သင်တန်းသားတွေသတင်း၊ သင်နေရတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအခက်အခဲ( nuclear မဟုတ်ပါ။) ဒီအခက်အခဲတွေကြားမှာ ဒီ site ထဲက လေ့လာ သူနေတွေက အမှားတွေထောက်ပြရင်းခေါ်သွားပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ site လေးပါ။ ၀င်လေ့လာကြည့်ပါ။ (ဟီး.. ပြန်ဖတ်ကြည့်မှ.. ခံစားချက်တွေပါနေမှန်းသိတော့တယ်။:Dထားပါ....။)
ကို Alexander ခင်ဗျ၊ ကျွန်တော့်ဆီမှာ Russian Language နဲ့ပတ်သက်ပြီး 1st level အထိ reference ၃ အုပ်ကို scanner ဖတ်ထားပါတယ်။ ၀ယ်ရင်တော်တော်စျေးကြီး မှာပါ။ လိုချင်တဲ့သူများရှိရင် ကျွန်တော် Upload တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။ ( file size တော့ကြီးပါတယ်။ )
နောက်ပြီး ကိုဘီလူးဖီးနစ် (www.engineer4myanmar.com) ဆီမှာလည်း ရုရှဘာသာလေ့လာဖို့ စာအုပ်တွေရှိနိုင်တယ်ဗျ။ လိုချင်ရင် လှမ်းတောင်းလိုက်ပါ။ သူကအဲလိုကူညီရတာ
komoe09 wrote: »
http://www.sharedtalk.com/ ဒီလင့်လေးကို ၀င်ကြည့်ပါဦး။ ရုရှဘာသာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာတော်တော်များများလေ့လာနေသူတွေနဲ့ type chat ရော၊ voice chat ရောပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီခဲ့တာ ဒီ site လေးပါပဲ။ ရုရှကိုရောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားကို လူရိုင်း မျိုးနွယ်စုကလာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ဘာသာစကားဆရာမနဲ့ စကြုံရတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲ Bro ? Bro လဲသိတယ်။ ကျနော်လဲသိပါတယ် ....
ဒီလို မဖြစ်ရတော့အောင် IT သမားတွေနေနဲ့ကျနော်တို့ကြိုးစားနေတယ်။
Bro တို့ လဲ ကူညီပေးကြပေါ့
ဖော်ရွေမှုမရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေ (အင်း.. ဥရောပစတိုင်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေ) ကြားမှာ၊ ရတဲ့လစာနဲ့ ဘယ်သူမှ အထင်ကြီးအောင်လည်းမနေနိုင်လေတော့ ဘာသာစကားလေ့ကျင့်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၆၀ ဆယ်ကျော်မိခင်ကို ခွဲထားခဲ့ရတဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီး လာလာတွေ့နေရတဲ့ချစ်သူ၊ မိဘသေပြီဆိုပြန်ခွင့်မရကြတဲ့သင်တန်းသားတွေသတင်း၊ သင်နေရတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအခက်အခဲ( nuclear မဟုတ်ပါ။)
နားလည်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ တစ်ညအိပ်ပဲ သဘောင်္စီးရတဲ့ အရပ်မှာနေနေတဲ့ ကျနော်တောင် Home ကို လွမ်းတာ တခါတလေ သေမလောက်ပဲ။ ဒါတောင် ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်လူမျိုး တွေကြားမှာလေ။ ဘန်းကျော်ပြင်ပရောက်နေတဲ့ သူတွေကို စာနာပါတယ်။
ဒီအခက်အခဲတွေကြားမှာ ဒီ site ထဲက လေ့လာ သူနေတွေက အမှားတွေထောက်ပြရင်းခေါ်သွားပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ site လေးပါ။ ၀င်လေ့လာကြည့်ပါ။ (ဟီး.. ပြန်ဖတ်ကြည့်မှ.. ခံစားချက်တွေပါနေမှန်းသိတော့တယ်။:Dထားပါ....။)
တင်ပေးပါ Bro ... ကျနော်တို့ လိုအပ်မှာပါ။
ဟုတ် ... တောင်းလိုက်ပါမယ်။
ရုရှကိုရောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားကို လူရိုင်း မျိုးနွယ်စုကလာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ဘာသာစကားဆရာမနဲ့ စကြုံရတယ်။ ဖော်ရွေမှုမရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေ (အင်း.. ဥရောပစတိုင်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေ) ကြားမှာ၊ ရတဲ့လစာနဲ့ ဘယ်သူမှ အထင်ကြီးအောင်လည်းမနေနိုင်လေတော့ ဘာသာစကားလေ့ကျင့်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် တစ်ခါမှလဲ ရုရှားကိုမရောက်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရုရှားလူမျိုးတွေက ဥရောပနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ နေကြပါတယ်။ ကျနော်ဆက်ဆံဖူးတဲ့ရုရှားလူမျိုး၊ ရုရှားဘာသာစကားပြောတဲ့လူတွေဟာ အနည်းနဲ့အများရိုင်းစိုင်းကြပါတယ်။ အရှက်ကြောက်မရှိတာများတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုလုပ်ဖို့ဆို၀န်မလေးကြဘူး။ အားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပေမယ့် ရုရှားစကားပြော (from Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan) (from Ukraine and so on) သူတွေက စရိုက်ကြမ်းကြတယ်၊ Netherlands, Poland, Belgium, Finland စတဲ့ အနောက်ဥရောပ အလယ်ဥရောပမှာနေကြတဲ့ ဥရောပသားတွေကတော့ Russians တွေလိုမဟုတ်ပဲ အများစုက ကိုယ်ချင်းစာပြီး သဘောထားကောင်းကြပါတယ်။ ကျနော် personally ပြောရမယ်ဆိုရင် Russian တွေကို ကျနော်လုံး၀မကြိုက်ပါ။ သူတို့နဲ့ သူငယ်ချင်းမလုပ်ပါ။ ရုရှားစကားကိုလဲ အချိန်ကုန်ခံပြီး မသင်ချင်ပါ။
ဥရောပစကားသင်ချင်ရင် ဂျာမဏီ၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန် ဘာသာစကားထဲက တစ်ခုခုသင်မယ်ဆိုရင် သူတို့မှာ အလုပ်ရဖို့က မခဲယဉ်းပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားကတော့ ပထမနေရာပေါ့။
စာကြွင်း၊ ကျနော်ဒီ Thread ကို ဆန့်ကျင်ပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျနော့် personal viewpoints ကိုပြောတာပါ။ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါ။
personally ပြောရမယ်ဆိုရင် Russian တွေကို ကျနော်လုံး၀မကြိုက်ပါ။ သူတို့နဲ့ သူငယ်ချင်းမလုပ်ပါ။ ရုရှားစကားကိုလဲ အချိန်ကုန်ခံပြီး မသင်ချင်ပါ။
အမှန်ပါပဲ ... ကျနော် အကြွင်းမဲ့ လက်ခံပါတယ်။
အဲ Russian ကောင်တွေက Europe မှာ အရိုင်းဆုံး ... ... ... အဟုတ်ပဲဗျ။
တခြား စိတ်၀င်စားစရာ ... Impressive ဖြစ်စရာ ...Russia သမိုင်းကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ ပထ၀ီ၀င်၊ ...... အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ ....... အဲဒါတွေကြောင့် ကျနော်ကစိတ်၀င်စားခဲ့တာ။
အမှန်ကတော့ ... လူ ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက် စိတ်မ၀င်စားတဲ့ နိုင်ငံ နဲ့ ဘာသာစကားပါ .... :5:
ဒါကြောင့်လဲ ကျနော် Thread တင်လိုက်တာ။
ေ၀ဖန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ... ... ... :6:
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ကို Alexzander လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ pdf ၃ အုပ် သာပိုင်လို့ကတော့ ရုရှ တစ်ယောက်နီးနီးပြောနိုင်ပြီဗျာ။ စကားပြောဖိုင်တွေလိုချင်ရင်လည်းတင်ပေးမယ်။ အလွယ်သုံးနိုင်အောင် Grammar Notes တွေထုတ်ထား တာလည်း လိုချင်ရင်တင်ပေးဦးမယ်ဗျာ။ အင်း.. ဒါဆိုဒီအကောင့်ကိုဆက်သုံး နေရဦးမှာပေါ့။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ..။
file name တွေက ru font နဲ့ဖြစ်နေလို့မပေါ်တာပါ။
အင်းအခုမှ ဘာသာစကား နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောတော့မယ်။:D ကျနော်က အခွင့်အရေး ရရင် ပြင်သစ် ဘာသာလေ့လာချင်တယ်ဗျ။ ပြင်သစ်က ဥရောပတစ်ခွင်နဲ့၊ တစ်ချို့အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ကနေဒါနိုင်ငံတို့မှာ သုံးနေကြတယ်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်ကတော့ မသင်မဖြစ်ဆိုတော့ ထည့်ပြော စရာမလိုတော့ဘူး။ ပြင်သစ် သဒ္ဒါကိုလဲ ကြိုက်တယ်ဗျ။
ကိုရီးယား ကားတွေကြည့်ပြီး ကိုရီးယား စာပေအနုပညာ တွေကိုလဲ ဖတ်ချင်၊လေ့လာချင်လာပြန်ရော။ ပြီးတော့ ကိုရီးယားက နောက်ဆယ်စု နှစ်လောက်မှာ အာရှမှာ ဦးမော့ လာနိုင်ဖို့များတယ်။ဘန်းကျော်သား ဆိုရင် ကိုးရီးယားနဲ့ အလုပ်လုပ်စားလို့ ရမယ်လေ။ (ပိတ်ဆို့တဲ့ အထဲမှာကိုရီးယားမပါဘူး ထင်တာပဲ။) ဘန်းကျော်-ကိုရီးယား export and import အလုပ် လုပ်လို့ရမယ်ထင်တာပဲ။ ကိုရီးယားတွေ အီလက်ထရောနစ် မှာ ဒီထက်ပိုပြီး စျေးကွက်ရလာရင်၊ ဘန်းကျော်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ စက်ရုံတွေလာဆောက် နိုင်တယ်လေ။ အဲဒီအခါကြရင် ကျနော့်တို့ လူမျိုးတွေ အလုပ်ကော၊ အတတ်ပညာကော ရနိုင်တာပေါ့လေ။ (ဒီလိုပဲ သူများကိုပဲ မျှော်လင့်ရမှာပဲ၊ တတ်နိုင်ဘူး။)
မှတ်ချက်။ ။ ကိုရီးယားဘာသာ လေ့လာနိုင်ဖို့ အရေး ကိုရီးယားမလေး တစ်ယောက်နဲ့ Date လုပ်နေပါကြောင်း။ :P ပညာသင်ခါ မရှက်ရာလေဗျာ။
အွတ်ပါး mm_legend :D:D
Translation Site လေးတစ်ခုပါ။ တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ အသံထွက်လဲရတယ်။
Eng to Rus ... Rus to Eng ပြောင်းလို့ရတဲ့အပြင် .....
ရုရှား ဘာသာ စကားအကြောင်း ဆွေးနွေးနေလို့ စိတ်၀င်စားမိပါတယ်။ရုရှား ဘာသာစကား ကို စိတ်၀င်စားတာ ကောင်းပါတယ်။စိတ်မ၀င်စား တဲ့သူများကိုလည်း အပြစ်မပြောပါ။ရုရှား ဘသာ စကားကို လေ့လာဖို့ စိတ်၀င်စားတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။သင်ယူဖို့ အကူအညီလိုတယ် ဆိုရင်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော့် မေလ်းက [email protected] ပါ ။ ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်